Malunga nathi-QUANZHOU HOPE SHOE Co, Ltd.
Yasekwa ngonyaka ka-2010, inkampani yethu ingumenzi weenyawo ezinyanzelekileyo. Inkampani yethu ikwisixeko saseQuanzhou, kwiphondo laseFujian. Ukusuka apha sinikezela nge-R & D, Imveliso, uLungiselelo, ukuThenga kunye nokuXhasa imisebenzi. Sineqela lomthengisi oyingcali ukubonelela ngenkonzo epheleleyo kunye ne-sublimated, ekuvumela ukuba wenze naluphi na uyilo olufunayo kwaye uvelise naziphi na izicathulo ozifunayo.
Ukuvelisa amandla: izihlangu ezibini ezi-2,5 ukuya kwezi-2,5 ngonyaka izicathulo ngonyaka
Ukufika konyaka: ngaphezulu kwe- $ 20 yezigidi kwaye iqhubeka ikhula ngokuthe ngcembe
Hayi. Ngemida yemveliso: 3
Amanqaku aphambili: kuMantla Merika, eYurophu, eMzantsi Merika, eJapan
Iimveliso eziphambili: izicathulo zezemidlalo, izicathulo eziqhelekileyo, izicathulo zangaphandle kunye neebhutsi.
Abathengi abaphambili: ii-Skechers, Diadora, Gola, Kappa, njl.
Senza izihlangu ezizezethu abathengi umnqweno. Siyayazi imakethi, silandela uphuhliso ngokusondeleyo kwaye siyakwazi ukuphendula ngokukhawuleza kwimikhwa emitsha.
Zonke izihlangu ziqala ukuphuma kwibhodi yokudweba yabayili. Uyilo kunye nesampula efanelekileyo ke iyavezwa. Imveliso iqala nje ukuba zonke iinkcukacha zifezekise iimfuno zomthengi. Abathengi abaninzi sele benazo iilebhile zabo eziveliswe ngale ndlela. Ngaba ungathanda ukulandela emanyathelweni abo?
Izihlangu zethu Zenzelwe Inzala yakho
Ngokudibanisa kunye nathi, uneqabane elinokukunceda ufezekise imbuyekezo ephezulu yokuthengisa izihlangu. Umzekelo, iinkampani zeshishini lefashoni ezazingenazo izihlangu kuluhlu lwazo, kodwa elaliqonda ithuba. Basondele kuthi ukufumana ingcebiso kunye nolwazi ukufumana ulwazi malunga nokukhetho, kubavumela ukuba bangene kweli lizwe litsha lezihlangu zilungiselelwe kakuhle. Kumava ethu-kwiimeko ezininzi, lawo manyathelo okuqala alumkile sele enobudlelwane bezoshishino bexesha elide ngokusekwe kukuthembana, amava kunye nokuguquguquka.
Ukuba namava kweminyaka eli-10 kuHlobo lweZicwanyana kunye neMveliso.
Besikade sivelisa kwaye sithumela izicathulo kude kwangonyaka ka2010. Ukusukela ngoko, izigidi zababini zifumene indlela eya kumadoda, abafazi kunye nabantwana kwihlabathi liphela. Senza izicathulo nangasiphi na isitayile, umbala kunye noyilo olufunwa ngabathengi bethu. Iimveliso zethu zinobuhlobo kokusingqongileyo kwaye zinokuthobela i-REACH, CISIA kunye nezinye iimvavanyo zabathengi.